Global Voices teny Malagasy » Fahasalamana/Maneran-tany: Nofoanan’Atoa. Obama ny politikan’ny ”Global Gag Rule” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Jolay 2018 12:54 GMT 1	 · Mpanoratra Juhie Bhatia Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Avaratra, Afrika Atsimo, Etazonia, Filipina, Ghana, Kenyà, Oganda, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Vao tamin'ny herinandro voalohany niasany, efa nanafoana ireo fepetra politika fantatra amin'ny ankapobeny tamin'ny anarana hoe “Global Gag Rule ”(amin'ny teny anglisy) ny Filohan'i Etazonia. Noraisin'ireo hetsika ho an'ny zon'ny vehivavy soa aman-tsara izany ary koa ireo vondrona miresaka ny fisorohana sy ny fahasalamana, satria hahafahana indray mamatsy vola ireo fandaharanasa iraisam-pirenena amin'ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana.
Nandrara ny famatsiana vola ataon'ny fanjakana amerikana amin'ireo vondrona sy hôpitaly manao na mampiroborobo ny fanalàna zaza na ihany koa miady ho amin'ny famadihana izany ho ara-dalàna ity politika ity, fantatra ihany koa amin'ny hoe ”ireo fepetran'i Meksika”. Nanafoana ireo fepetra ireo i Atoa. Obama ny alin'ny fitsingerenan'ny faha-36 taonan'ny fitsarana ny Roe contre Wade , izay nanaovana ho ara-dalàna ny fanalàna zaza tao Etazonia. Nampidirina tamin'ny 1984 ireo fepetra ireo ary nampiharina na nofoanan'ireo filoha rehetra nifanesy. Manazava ny lahatsoratra iray ao amin'ny blaogy South-South (amin'ny teny anglisy toy ireo blaogy rehetra voatanisa):
Tsikera maro no nanakiana ilay ”“Global Gag Rule” satria fehezin'ireo fepetra ireo ny fandraisan'ny zanaka ampielezana anjara amin'ny adihevitra momba ny fanalàna zaza any amin'ny fireneny. Araka ny blaogy Texas in Africa , ny olana hafa aterak'ity politika ity dia ny hoe manjavozavo loatra ilay izy.
Teo ampahitàna izany, derain'ny blaogera maro ity fanapahankevitr'i Atoa. Obama ity ary asongadin-dry zareo ny fiantraikany lehibe eo amin'ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny fandrindrana tokantrano manerana izao tontolo izao . Mihevitra  i Danie, Danie, Danie fa mila misaotra an'i Atoa. Obama isika, raha toa ka manoratra kosa  i Arash Kardan hoe:
Na izany aza, nomelohin'ireo vondrona maro miady amin'ny fanalana zaza ity fanapahankevitra ity, ohatra, ilay hoe tokony tsy ho laniana hanohanana ny fanalana zaza ny volan'ny amerikana mpandoa hetra, sy ny hoe hankahery ny fanalana zaza manerana izao tontolo izao izany. Niampanga  ny fanapahan-kevitr'i Atoa. Obama ny Vatican , ary niteraka tahotra tany amin'ireo firenena voakasik'ity famatsiambola ity izany. Maneho hevitra momba ireo fanehoankevitra tao Filipina mikasika ireo sehon-javatra ireo ny blaogy filipiana Mike in Manila:
Mahatsikaritra  i Nicholas, tao anatina hafatra iray niseho tao amin'ny blaogy Staying Left, Living and Driving in South Africa (Mijanona ho havia, Miaina ary Mamily ao Afrika Atsimo), fa tsy dia fahita loatra ny safidy amin'ny fanalana zaza any amin'ny firenena mila ity famatsiambola ity :
Sarin'ny The Abortion Debate  avy amin'ny Better In the Basement  tao amin'ny Flickr.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/26/123129/
 Global Gag Rule: http://flickr.com/photos/nataliestat/
 Roe contre Wade: http://fr.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wade
 Manazava : http://ppdafrica.blogspot.com/2009/01/global-gag-rule-rescinded-today-by-us.html
 Texas in Africa: http://texasinafrica.blogspot.com/2009/01/gag-reflex.html
 manoratra kosa: http://www.almadinnah.com/2009/01/breaking-obama-reverses-the-global-gag-rule/
 Maneho hevitra momba ireo fanehoankevitra tao Filipina : http://mikeinmanila.wordpress.com/2009/01/24/obama-reveses-mexico-city-policy-us-to-fund-abortion-clinics-in-third-world/